Itoobiya iyo Suudaan oo dagaal kale ku dhexmaray xadka u dhaxesyo iyo xiisada taagan – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Itoobiya iyo Suudaan oo dagaal kale ku dhexmaray xadka u dhaxesyo iyo xiisada taagan
Ilo wareedyo ka tirsan Milliteriga Sudan ayaa Aljazeera u sheegay inay iska horimaadyo dhexmareen Ciiddanka Sudan iyo kuwa Ethiopia ee ku sugan magaalladda Melkamo ee ku taalo xadka u dhaxeeya labadaas dal, xilli ay Ethiopia ay dhanka kale wali dagaal xooggan kula jirto Jabhadda Xoreynta Tigrayga.
Maamulaha xafiiska Aljazeera ee dalka Itoobiya, Maxamed Taha Tawakul, ayaa sheegay in xilliyadii lasoo dhaafay ay goob joog u ahaayeen dhaleeceynta Itoobiya ee ku aaddan kooxaha Addis Ababa ay u aqoonsantahay iney yihiin “argagixiso”, kuwaasoo ka gudbeen xadka Suudaan una gudbeen gobolka Benishangul.
Agaasimaha xafiiska ayaa tilmaamay in ay jirto xiisad aamusan oo u dhaxeysa labada dhinac, inkastoo dhanka Suudaan ay sidoo kale ku mashquulsan yahiin qalalaasaha siyaasadeed ee kala guurka ah, halka dhinaca Itoobiyana ay ku mashquulsan yihiin qalalaasaha Tigrayga.
Waxa uu ku macneeyay in ay jiraan eedeymo aan rasmi ahayn oo ka dhan ah Suudaan kuwaasoo ku aadan in kooxaha hubeysan ee mucaaradka ah ay ka talaabeen xadka Suudaan.
Horaantii bishaan ayay aheyd markii maamulka Itoobiya ay ku dhawaaqeen xaalad deg-deg ah oo guud ahaan dalkaas lagu soo rogay muddo Lix Bilood ah, waxaana go’aankan uu yimid kadib markii ay jabhadda Tigray-ga ku hanjabtay inay kusii wajahan tahay caasimadda Adis-ababa.
Xiisada kadhex aloosan Suudaan iyo Itoobiya ee dhanka Xadka ayaanan haatan soo bilaaban, waana mid soo jireen ah oo soo jirtay tan iyo waagii gumeystaha, balse xaalada qalalaase ee labada dal bartanka kaga jiraan ayaa haatan keentay in xiisadooda isku badasho mid aamusan, walow dhanka xuduuda iska hor-imaadyo toos ah ka dhaceen.